"Zava-dehibe ny fahamailoana": mandray andraikitra amin'ny Coronavirus ny Nosy Solomon
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » "Zava-dehibe ny fahamailoana": mandray andraikitra amin'ny Coronavirus ny Nosy Solomon
Niantso ny mpitsangatsangana rehetra nankany amin'ny Nosy Solomon i Solomonons fizahantany mba handray «fitandremana fatratra» ny torohevitra avy amin'ny minisiteran'ny serivisy misahana ny fahasalamana sy ny fitsaboana any Nosy Solomon Solomon (MHMS) momba ny valanaretina Coronavirus ankehitriny.
Ny tale jeneralin'ny fizahan-tany Solomonons, Josefa 'Jo' Tuamoto dia nilaza fa mbola tsy nisy tranga nahitana virus tamin'io hatreto ny Nosy Solomon, ny manampahefana misahana ny fahasalamana eo an-toerana dia nanao izay rehetra azo natao mba tsy hisian'ny fanafarana aretina.
Io, hoy izy, dia nahitana ny fanaraha-maso ny seranan-tsambo rehetra sy an-dranomasina ary toerana fidirana hafa ho anisan'ny fepetra nohamafisina mba hahitana izay mpandeha rehetra tratran'io virus io.
"Miambina hatrany ny fahefàn'ny mpitsabo anay, ny fomba fanaraha-maso dia nopetahana tamin'ny seranan-tsambo sy an-dranomasina ary toerana fidirana hafa rehetra, ary eo am-pelatanan'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana hijery ireo mpandeha rehetra hiditra raha misy fambara marary."
"Ny fahamalinana no lakileny eto," hoy Andriamatoa Tuamoto.
Tamin'ny fanambarana navoakany androany, ny sekretera maharitra MHMS, Pauline McNeil dia nilaza fa rehefa heverina ny firenena akaiky dia efa nanoratra tranga ahiahiana, ny mety hisehoan'ny Coronavirus any amin'ny Nosy Solomon dia tsy azo nolavina.
Nanoro hevitra Ramatoa McNeil fa efa nanangana vondrona miasa teknika ny minisitera ao anatin'izany ireo manampahaizana avy amin'ny World Health Organization sy UNICEF.
"Ny fitaovam-pitsaboana tena ilaina hiatrehana ny trangana 2019-nCoV dia hahetsika ihany koa ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana dia mijoro miaraka amin'ny loharanon-karena fanampiny raha ilaina izany,"hoy izy.
"Tianay ny hanome toky ny rehetra - na ny olona eo an-toerana na ny mpizahatany mankany amin'ny Nosy Solomon - fa miomana amin'izany trangan-javatra izany izahay," hoy i Ms McNeil.
“Amin'ny maha 'laharana voalohany' fiarovana dia miasa miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina sy ny seranan-tsambo ao amin'ny seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina ny MHMS, mampiofana azy ireo amin'ny fomba hahafantarana ireo tranga nisy tamin'ny 2019-nCoV.
“Ireo mpitsidika tonga dia homena torolàlana momba izay tokony hatao raha mieritreritra izy ireo fa voan'io aretina io.”
Mandritra izany fotoana izany dia nilaza izy fa tokony hiambina hatrany ny rehetra amin'ny fambara na soritr'aretin'io aretina io indrindra raha nitsidika an'i Wuhan, faritanin'i Hubei, Sina izy tao anatin'ny 15 andro lasa na nifandray akaiky tamin'izay niverina avy any amin'ny firenena voakasik'izany mampiseho soritr'aretina mitovy amin'izany.
Raha hamaky vaovao bebe kokoa momba ny fitsidihan'ny Nosy Solomon Eto.